Kismaayo News » DHAXAL WAREEG: Dhiifoonaada Soomaaliyeed Dheeshu Waa halise!
DHAXAL WAREEG: Dhiifoonaada Soomaaliyeed Dheeshu Waa halise!
DHAXALWAREEG ( Gabay Cusub)
“Dhayal xaalkii gudubyoo
Riyo laga dhursugo iyo
Dhadhab looma baahnee
Intaan DHAXALWAREEG iyo
Dhib la mudan adduunyada
Aakhirana dhinbilo naar
Dheddig iyo labkiinnuba
Dhimashadu mar weeyee
Shacbiyahow la dhaansado
Diin baad ku dhalatee
Xumaatada ka dhiidhiya!!”
(Maansadii Dhalanteed, maarso 2004)
Ereyada kor ku xusani waxay ka mid ahaayeen, maansadii Dhalanteedee soo baxday bishii Maarso sanadkii 2004ta. Xilligaas waxaa xeradii Doofaarrey ee waddankaKenya lagu shirinayay kooxo ay hormuud u ahaayeen qabqableyaashii dagaalku. Maansadu waxay si aad ah uga digeysay, cawaaqibxumada ka dhalan kartay haddii aysan dadka Soomaaliyeed dhaqso ugu baraarugin dhagartii lala maagganaa, aayahoodana ay ku aaminaanItoobiya,Kenya iyo adeegeyaal ay iyagu soo aruursadeen.
Nasiibdarro, shirqoolkii Doofaarrey shartii laga dhaxlay shaahid ayaa loo wada ahaa oo iskaga sheekeyn meyno. Waxaase maanta taagan arrin shiiqisay shiddooyinkii la soo maray shantii sono ee la soo dhaafay, taasoo ah shaxda cusub iyo sheegashooyinka ay Kenya ku soo hunguriyaysay dhulbadeed Soomaaliyeed oo baaxaddiisu ay gaareyso 38000 km2 , sida ku cad cilmibaarislagu kalsoonyahay oo ay sameysay Somalitalk.com.
Sida ay qirteen qolooyinkii Soomaalida heshiiskaan hagardaamo u saxiixay, waxaa ayaan darro ah in sasabasho sooreysan ka dib , saddex saac gudahood ay Kenya u ogolaadeen in ay sheegan karto dhul- badeedka barwaaqadu ceegaagto ee aan bedkiisa kor ku soo xusnay, kaasoo ay horeyba Kenya u qoondeysatay iney ku darsato dhulkeeda badda ah ee ay batroolka ka baareyso.
Gabayga Dhaxalwareeg oo soo baxay 11 April 2009, wuxuu mar kale ka digaayaa khatarta cusub ee soo foodsaartay ummadda Soomaaliyeed. Haddaan shalay maqleynay dhul keenna ah oo uu gumeysigii Ingiriisku ku wareejiyayKenya iyo Itoobiya, maanta waxaan u joognaa baddii Soomaaliyeed oo qaar ay soori-qaadday Soomaalina sheeganayaa ay horteenna ku saxiixayaan, Saatirku ha naga samatabixiyee. Haddaan horey uga maqalnay shaqsi mas’uul Soomaaliyeed sheeganaya in la baabi’inayo xadka Soomaaliya iyo Itoobiya, hal baasaboorna la qaadanayo, maantana waxaan ka maqalnay mid kale oo mas’uuliyad sheeganaya in uusanba jirin xad u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya (dhinaca badda). Haddii arrinku uu sidaan ku sii socdana, berri waxaa dhici doonta iney soo baxaan dad ku doodaya in wax dhul Soomaaliyeed la yiraahdaba uusan jirin, sida maantaba ay qaar ugu doodayaan in ay wax Soomaali la yiraahdo aysan jirin.
Inta ay goori goor tahay, waxaa la gudboon ummadda Soomaaliyeed oo ay waxgaradkeedu horkacayaan in ay dhacdadaan ka dhiidhiyaan, dhulkoodana ay difaacdaan. Waa in lagu baraarugsanaado haddii sheegashada tijaabada ah ee ay hadda Kenya waddo ay meelmarto, in arrintaasi ay hordhac uu noqon doonto sheegashooyin iyo heshiis-dhagareedyo ka sii khatar badan kan hadda la wadwado, kuwaas oo lagu boobayo badda iyo berriga Soomaaliyeed, Rabbi ha na badbaadiyee.
Waxaa amaan gaar ah mudan bahda Somalitalk.com oo boobka badaheenna lagu hayo nagu baraarujiyay, dadaal aan la qiyaasi karin oo nafhurnimo ahna sameeyay. Cilmibaarista ay soo bandhigeen waa mid tusaale fiican u noqon karta doorka ay warbaahinta Soomaaliyeed ka qaadan karto waxkaqabashada halista soo foodsaartay ummaddooda.
Gabayga Dhaxalwareeg, wuxuu ku halqabsanayaa tifaftiraha Somalitalk Inj. Maxamed Cali, oo aan si aad ah uga warhayo kaalinta lama illoobaanka ah ee ay isaga iyo saaxibadiisa howsha la wadaa ay uga jiraan halganka lagu badbaadinayo ummaddaan beylahan ee ba’a lala maagganyahay.
Wuxuuna gabaygu ku bilaabanayaa:
Ilaahey dhureeyow Maxamed dhiirranow saaxib
Dhacadiid adoo heli kariyo dhereg inaad jiifto
Waxan aad la dhuudhuubatee gororin dhuuxaaga
Dhaxantaad lugeyneyso iyo dhafarka kaa muuqda
Dhididkaaga hooraaya iyo dheelmashiyo ciilka
Dhambaallada ad noo soo qorteen dhaciyo duullaanka
Dhaameelka qaar lagu hodoo dhunjin carruurtooda
Iyo ruux ogaalkii dhinmoo dhimirku naafoobay
Dheeldheel dabbaalkaa u qaba dhoohaniyo tuuge
Qofkii dhuuniraac aan aheyn hubanti dhiillooye.
Ruux dhadhamo kaa qaaddayoo dheri un eegaaya
Dhaqanxumida qaarkeed ninyahow waa dhaliil culuse
Waa dhaawac iimaanka gala dhayidna loo hayne
Bangiyada dhigaalkooda iyo dheeri lagu biirshay
Haddii dheeman waxa dunida yaal dahabka loo dhiibo
Dhururuqa miskiin yaabbanoo dhibbani uu haysto
Dhiilaha agoontoy xadaan iyo dhar jeexjeexan
Dhiitintey ka jecelyiin iney wax un dhag siiyaane
Maatida kuwii dhuuqayiyo maxasta dhiiggeeda
Ee dhamacda kulul quudan jiray dhuxulo qiiqaaya
Ciiddii markey dhoofiyeen oo dhir lagu diimay
Waa kuwaa dhitadi keydsaneyd hoos u dhaadhacaye
Baddeennii dharaarta cad miyaa shilin la dhaafsiistay?
Dhadhaabaha is fuulfuula iyo dhagaxa mooyaane
Noolaha dhaqaaqiyo nafluhu weys dhageystaane
Innagaase dhub ah oon maqleyn dhawaqa noo roone
DHALANTEED markii aan tirshiyo maanso dhumuc weyn leh
DHAKAFAAR-na aan raacshay iyo dhowr la miisaan ah
Dha’leydaad walaalow ogeyd dhaanto ma aheyne
Dhurwaa iyo markey noo tashade Dhidar na gaadaaya
Oy dhimaneyaal shirinayeen wada dhareeraaya
Dhunkaashii la qooshaayayee dheefta lagu sheegay
Burcaddii la dhoodhoobayiyo dhismaha miineysan
Dhakhaatiirta kuwii sheegan jiray dhagar maleeggooda
Dhibishdhibishtii socotaan ka naxay oon la dheygagaye.
Afkoo dharaq leh indhahoo dhinbila iyo korkoo dhogor leh
Wuxuu nacabku dhuudhuunto oo dhabarku muuqdaaba
Dhangad iyo wixii uu ka baqo hanad dharbaaxyeeya
Dhacantiyo wuxuu ooddayada dhinacyo joogjoogo
Dhaadhaanno aaminay wuxuu dhaar u maro beena
Ama uu basaas dhaansadoo dhuro sir noo taallay
Dhuudhigiyo liitaha wuxuu dhakada saartaaba
Danaheenna waxa uu dhabqiyoo nabadda dhiiqeeyo
Colaadaha wuxuu laba is dhalay Suug isugu dhiibo
Malaayiin markey dhimata oo dhoobo lagu aaso
Waa tuu dhursugayee wuxuu qosol dhikhleeyaaba
Dhambacaad asoo siqi wuxuu nagu dhowaadaaba
Dhugashada markii uu hubsaday inan cid dhowreynin
Dhilqe-kibir waa kaa soo dhacoo hororkii soo dhigaye
Mar haddii dhulkeennii la yiri dhaqsada oo keena
Haddey xaajadii dhii tagtoo DHAXAWAREEG Muuqdo
Waa waajib inaan dhiidhinnoo wey dhanaantahaye
Dhiifoonaada Soomaaliyey dheeshu waa halise.
Dhiifoonaada Soomaaliyey dheeshu waa halise